apple & apos; s 2020 iphone 12 mutsara unoratidzwa mune yakanaka dhizaini inoshandura
Kuru Nhau & Ongororo Apple & apos; s 2020 iPhone 12 mutsara unoratidzwa mune yakanaka dhizaini inoshandura
Apple & apos; s 2020 iPhone 12 mutsara unoratidzwa mune yakanaka dhizaini inoshandura
Apple haisi & apos; kwete chaizvo mukumhanya kana zvasvika pakugadzira zvigadzirwa. Iyo kambani yanga iine nzira ine hungwaru uye yakaverengerwa mukuumba kutaridzika uye kunzwa kwezvigadzirwa zvayo mumakore apfuura. Zvakanyanya kudaro, muchokwadi, kuti & maapos aigaro akakwevera kutsoropodzwa pamusoro peizvi, nevakawanda vachinzwa senge Apple iri kutamba zvakawandisa kudivi rakachengeteka.
Chinhu chimwe ndechechokwadi, asi-apo Apple painoshandura dhizaini yechimwe chezvigadzirwa zvayo, inogara ichinzwa sechinhu chikuru. Uye pamwe izvo & maapos; s muchikamu nekuti isu & maapos; takagadziridzwa kutarisira kuwedzera kuwedzeredzwa, asi zviri & apos; zvakare nekuti shanduko huru dzinouya mushure memakore ekufungisisa nekutsvaga.
Ngatitorei maapos anotora iyo iPhone, semuenzaniso. Zviri pachena kuti shanduko inoshamisa kwazvo yemaitiro Apple mafoni anotaridzika akauya neiyo iPhone X uye yayo yakareba notched kuratidza. Asi zvimwe kunze kweizvozvo, maPhones ese anonzwa sekunge akakandwa muforoma imwechete neiyo iPhone 6, iyo yakaunzwa muna2014.Makona akapoteredzwa, firati rine girazi, girazi rechidzitiro rakakomberedzwa (2.5D) - zvese zvakakosha zve iPhone dhizaini isina kana kuchinja pane apfuura makore mashanu.
Izvi zvinogona kuchinja, zvisinei, nekuunzwa kweiyo 2020 iPhone mamodheru, kuburikidza neayo Apple runyerekupe rwekumutsidzira dhizaini dhizaini kubva kumakore gumi apfuura-iyo yeiyo iPhone 4.
Iyo iPhone X yakaratidzira kusvetuka kukuru kumberi kweiyo Apple foni dhizaini, asi iyo iPhone 12 ichachinjisa imwe & maapos; retro 'kunzwa
Iyo boxy aesthetic yeiyo iPhone 4 uye iPhone 5 yakagadzirira kudzoka pane nyowani 2020 iPhone mamodheru
Chimiro chakapfava, chakakomberedza chakave nemafoni eApple kubva pakutanga chaipo - chengetera iyo iPhone 4 ne iPhone 5 - zvine musoro muchirongwa chikuru chezvinhu, sezvo zvakagadzirirwa kukwana zvakanaka muchanza chipi zvacho uye kunobatsira kushandiswa kwenguva refu kwe mudziyo. Chimiro icho chakashanda nemazvo, kutaura chokwadi, zvekuti isu & apos; tinomanikidzwa kuwana mafoni mazhinji mazuva ano asina & apos; ane akakomberedza mitsara.
Iine iyo iPhone 12, zvakadaro, Apple iri kunyeperwa kuti iri kubva kure neyakaipisisa mamakisi emamodheru aripo mukufarira unopinza, boxier aesthetic iyo inochinjisa dhizaini dhizaini yeiyo iPhone 4 uye 5. Chaizvoizvo, Apple yakatoedza chimwe chinhu chakafanana ne iyo nyowani iPad Pro, iyo yakasarudzika yakapinza micheto kupfuura mamodheru apfuura Iyo MacBook, zvakare, yatamira kune yakafanana dhizaini, saka zvingave zvine musoro kuti iyo iPhone ibatane navo. Mushure mezvose, Apple ndeye zvese nezve kuenderana.
Apple iPhone 12 dhizaini dhizaini inopa
Zvichienderana nerunyerekupe rwekuti anotevera iPhone mamodheru anogona kuendesa iyi boxier aesthetic, isu & apos; takagadzira imwe pfungwa inoshandura kuratidza ino shanduko mukugadzirwa kwechigadzirwa. Uye isu & maapos tave toti — kunyangwe tichisiya musoro wenyonganiso pamitsara yakasiyana yechigadzirwa parutivi - dhizaini iyi inotaridzika kunge inotonhorera.
Izvo zvichiri mangwanani-ngwanani, saka hatigone kuvimbisa kuti maPhones e2020 achataridzika chaizvo saizvozvo, asi achienda kune runyerekupe - uye achiona sekuti dhizaini nyowani ingakwanise sei mukati meiyo iPad neMacBook mitsara - isu & apos; d iti pane & apos; sa mukana wakanaka.
iPhone 12 inogona kusaperetera kupera kweiyo notch, asi ichave iri diki
Iyo iPhone 12 ichave iine makamera maviri kumashure, senge iyo iPhone 11, asi inotarisirwa kuve neinooneka zvishoma notch uye yakatetepa bezels
Zvinoenderana ne makuhwa apfuura , Apple inogona kunge ichiedza neiyo iPhone prototype iyo isina notch, asi yakanyanya bezels. Pfungwa ndeyekuti kambani ichakwanisa miniaturize iyo TrueDepth Face ID kamera, earpiece, uye kumberi-yakatarisana kamera kuti vakwanise kukwana kumusoro bezel yefoni. Ehezve, izvi zvinokonzeresa kune akanyanya bezels kutenderedza, asi inogona kunge iri yakanaka yekutengesa-kure, ikazomboitika.
Imwezve zvikuru-kuparadzira makuhwa inotaura kuti iyo iPhone 12 haizowani foni yechokwadi-skrini iyo isu yatakamirira, asi panzvimbo pezvo ichadzora notch pasi zvakanyanya, nguva yese ichichengetedza kugona kwakazara kweFace ID.
Iko & maapos s ano anonzi 'matatu-gore chigadzirwa chigadzirwa zororo' iyo Apple inoita senge iri kushanda pairi (kwechikamu chikuru, zvirinani). Ndokunge, kana shanduko huru ikaunzwa, inozoiswa pamusoro uye kukwizirwa kwezvizvarwa zvitatu kudzamara imwezve yekuzorodza yauya. Iyi nzira yakatungamira vazhinji kuti vatende, isu takasanganisira, kuti iyo iPhone 12 ichaunza chimwe chinhu chitsva maererano nedhizaini. Kunyangwe shanduko ichave yakakura sekubvisa notch, zvinoramba zvichionekwa.
iPhone 12 inogona kunge iri Apple & apos; s yekutanga quad-kamera foni
Apple yanga ichiisa mari zvakanyanya muAR mumakore achangopfuura. Iine ARKit yakagadzwa senzvimbo inokwanisa ye mobile yakawedzera chokwadi, uye nebasa pa Apple Magirazi zvinonzi kufamba pamwe nhanho ine hutano, isu hatina kana kumboshamisika apo Apple yakatangisa iyo nyowani iPad Pro ine LiDAR scanner kumashure. Panguva ino, isu tiri kutarisira kuti iyo iPhone 12 Pro uye Pro Max ive zvakare yakagadzirirwa neLiDAR scanner.
Kuonekwa kwechiedza uye rakatenderedza scanner (kana LiDAR kwenguva pfupi) inogona kuyera kudzama zvakanyatso nyatso kupfuura kamera yenguva dzose, saka icho chisarudzo chakaringana chekuwedzera kwechokwadi kunoshandiswa. Kamera yeLiDAR inoshandisa ultraviolet kana padyo-infrared mwenje kuti iratidze nharaunda dzayo zvakadzama. Iyo inoshanda pamwe chete neinonzwa iyo inodhonzera magetsi emagetsi, ayo anobhururuka kubva munharaunda uye achidzokera kune iyo sensor. Runhare runobva rwaverenga nguva yakatora mucherechedzo kuti idzokere mukati meiyo sensor, nekudaro ichigadzira yakaringana kudzika mepu yechiitiko kupfuura iyo ingangoitika kamera.
Nehurombo kune avo vaitarisira anzvazvinoyechina kamera, iyo LiDAR haisi iyo. Iyo inoshandiswa chete kuyera kudzika uye kwete kwekutora chaiwo mafoto kana mavhidhiyo.
Kudzoka kweRose Goridhe pamwe nerudzi rutsva rwepakati pehusiku?
iPhone 12 Pro PRODUCT Dzvuku dhizaini dhizaini
Space Grey uye Sirivheri ndiwo akakosha eApple & apos; s chigadzirwa dhizaini, asi zvakadiniko nemamwe mavara? Zvakanaka, neiyo iPhone 11 Pro isu takawana inonakidza nyowani yekuwedzera muchimiro che Midnight Green, iyo yataida chaizvo, kunyangwe iyo haina & apos; haina kutimisa isu kushuvira dzimwe sarudzo. Kwete kunyange zvitsva, hazvo.
Rose Goridhe yaive imwe yemhando dzakakurumbira dze iPhone kumashure muzuva, asi hatina kuona imwe kubvira iyo iPhone 7. Iyo iPhone XS uye 11 Pro yakaunza Goridhe Nyowani, iyo inofanirwa kuvhara gap pakati peyakajairwa Goridhe neRose. Ndarama, asi haisi iyo. Isu & apos; d tinoda kuona iyo iPhone nyowani iyo inoratidzira iwo wakajeka mumvuri wevamwe vayo vakautangira, kunyangwe kana iri mune yakanyanya kusadzikiswa nenzira kupfuura pakutanga.
Sezvo kusvika pakati pehusiku mavara anoenda, isu & apos; d kuve yakamisikidzwa nezve Mid Midnight Blue vhezheni! Isu tinofunga rima rebhuruu-grey mumvuri raizonyatsoenderana nemhando yeiyo iPhone, saka takatamba tichitenderera nepfungwa yacho kusvika tasvika pane izvo zvatinofunga mhedzisiro yakanaka kwazvo.
Disiki:Mifananidzo irimo mune ino chinyorwa dhizaini dhizaini yeiyo iPhone 12. Iwo akavakirwa pane yekutanga ruzivo ruripo nezve mudziyo, uye inogona kunge isingamiriri yekupedzisira kwayo dhizaini. Inzwa wakasununguka kuzvishandisa, chero bedzi iwe uchikweretesa PhoneArena nekubatanidza chinongedzo kuchinyorwa chino.
iPhone 12 uye iPhone 12 Pro Max dhizaini dhizaini inoshandura
samsung galaxy s8 kumucheto kwechiedza
maitiro ekupenya tsika kupora
LG V30 vs. LG V30 +: chii & apos; misiyano?
6 makesi akasarudzika akasimba eiyo Samsung Galaxy S6 kumucheto
Iyo microSD kadhi yafa! Chii chinotevera?
Motorola DROID Turbo 2 vs Samsung Galaxy Note5 vs Apple iPhone 6s Plus: specs kuenzanisa
Apple Kuona Akateedzana 2 Ongororo
Ese Samsung Galaxy S9 uye Cherechedzo 8 mamodheru zvino anouya nemahara memori makadhi (anosvika 256 GB)